Maxay Yihiin Waxyaabaha Ay Dadka Da’da Ahi Ay Ka Qoomameeyaan Ka Hor Geeridooda? |
Maxay Yihiin Waxyaabaha Ay Dadka Da’da Ahi Ay Ka Qoomameeyaan Ka Hor Geeridooda?
Sida ay muujisay cilmi baadhistan ayaa waxa ay sheegtay in 100 qof oo isugu jira rag iyo dumar la waydiiyay maxaa kuugu weyn oo wakhtigii aad soo qaadatay
qaadatay ku bixin lahayd haddi ay suura gal tahay inaad dib u hesho?
Dhamaaan dadkaasi waxay ku jawaabeen hal jawaab oo isku macno dhaw taasi oo ah in ay qaban lahaayeen fursado badan oo ay dayaceen intii ay xooga, awooda iyo wakhtigaba ay haysteen iyagoo lumiyay hamigoodi ay ku fikiri jireen.
Tusaale ahaan arimahaasi oo ay ka mid yihiin inay lumiyeen jaanisyo badan oo ay ku gaadhi lahaayeen guulo badan iyagoo u arkayay in aanay suurta gal ahayn maxaa yeelay waxay ay sheegeen in ay markaasi ula muuqdeen inay ka horayso khatar badani.
Hadaba akhristeSu’aashu waxay tahay haddii aad maanta haysato wakhti, caafimaad iyo waliba awood aad ku qaban kartid boqolaal hawlood oo kala duwan kuwaasi oo aad uga faa’iidaynayso naftaada, ehelkaaga iyo waliba bulshada aad ku dhex nooshahay ma kula tahay in aanad ka feejinaatoinaad ka qoomomaysid in aad dayacdofursadan aad hada haysatid?.
Qofkastaa waxaa uu leeyahay riyo ama himilo uu higsado taasi oo uu ku fikiro inuu mar uu gaadho, laakiin ma dhici karto haddii aanu qofku ku bixin wakhti iyo dadaal badan taasi waxay noqonaysaan uun hami cidlo ku lumay.
Qofku inuu lahaado hami sare noloshiisa waxay ka saacidasyaa ama ka caawinaysaa inuu ka badbaado dhibaatoyin badan, hamigu waxa uu qofka u kexeeya dhinaca nolosha wanaagsan.
Mar la waydiiyay Farsamo yaqaan sameeya diyaaradaha duulimaadka kala duwan sida diyaradaha xaamulka iyo kuwa dadka qaadaba?
Su’aashi oo ahayd diyaarada sidee u bad-baado ah inay hawado dul sabayso oo ay duusho iyo inay dhulka taagnaato?
Dad badan ayay jawaabtoodu noqon lahayd oo doorbidi lahaa in diyaaraduhu dhulkha taagnaadaan iyagaa ka cabsi qaba inay soo dhacdo.
Laakiin khabiirkan ku takhasusay farsamada ciladaha diyaaradaha sidaasi kuma uu jawaabin, waxa uu yidhi waxaa u fiican in diyaaradu mar kasta duusho oo ay hawada sabayso , ujeedada loo sameeyay ayaa ah in ay duusho oo ay hawada dhex socoto.
Haddii ay dhulka muddo dheer sii taalo waxaa ku dhacaya boodhka, dhaska kuwaasi oo xumayn kara hab sami duulka diyaaradaasi.
Hadaba qofku waxa uu ka dhigan yahay sida diyaaradaasi uga maarmi wayday inay hawada duusho waaa inuu qofkuna lahaado hami waayo haddii kale wuxuu noqonaysaa mid aanay noloshiisu lahayn ujeedo macno samaysa.
Ugu dambayn akhristayaal maxaa keena in aanu qofku gaadhin hamigiisa uu ku hamiyayo?
Waa xaqiiqo ma doon in qofkastaa leeyahay himilo ha yaraato ama ha waynaato laakiin waxaa Iyana xaqiiqo ah in qof kastaa gaadhi karo himilooyinkaasi.
Shayga dadkaasi ka hor istaaga inay ka midho dhaliyaan hamigooda ayaa ah iyagoo ka werwersan in ay ku guul daraystaan haddii ay sameeyaan isku daygoodaas.
Waxaataasina lagaga gudbi karaa isku day….isku day……hadana isku day kale….
Qalinkii: Yonis Faarah Osman